स्वस्थ नेपाल Healthy Nepal: August 2013
पोस्ट ड्युटीमा मज्जाले आराम गर्ने विचार 'थ्यो तर केही कुराले मलाई लेख्न वाध्य बनायो। म प्राय: कुनै कुरा (राम्रो होस् या नराम्रो)ले मन छोयो भने लेख्ने गर्छु। आज पनि अचानकै मैले आफुलाई लेख्न वाध्य भएको पाएँ।
आन्द्रामा प्वाल परेर दिसा पेट भरी फैलिएको अवस्था ‘पर्फोरेसन पेरिटोनाइटिस/ Perforation peritonitis’ भएको विरामी र आफन्तसँग कुरा गरेर हामीले अप्रेसन गर्नुपर्ने भनेर सम्झाएका थियौ। “अवस्था सिकिस्त रहेको, त्यसैले अप्रेसन गरेर विरामीलाई आइ सि यु राख्नुपर्ने हुनसक्ने, अवस्थामा अझै जटिलता आउनसक्ने तैपनी अहिलेको अवस्थामा अप्रेसनको विकल्प नरहेको र त्यो नगर्दा लगभग मृत्‍यु निस्चित रहेको र गरेमा सुधार हुनसक्ने सम्भावना रहेको” पनि भनेका थियौ। एक जना आफन्तले सोधे- "उहाको त चिनी रोग पनि छ अनी चिनी बढेको बेलामा त घाऊ निकै हुँदैन रे नि, अनी यस्तो बेलामा नि अप्रेसन गरेर घाऊ निको हुने ग्यारेन्टी दिनसक्नुहुन्छ त?" मलाई आफुले विरामिको अवस्थाको गम्भिरता बुझाउन नसकेको हो कि जस्तो नि लाग्यो, किनकी मेरो कुरा एउटा, उनिहरुको बुझाई अर्को भएको जस्तो लाग्यो। यहाँ ज्यानमै आफत आइसक्या’छ उनिहरु घाऊ निको हुने नहुनेमा अड्क्याछन्। घाऊ त पाक्ला नपाक्ला ज्यान बच्नुपर्‍यो नि, अनी त्यो सुगरको लेभल त घटाऊन सकिहालिन्छ नि। फेरी आम मानिसको बुझाउ कती सोझो हुन्छ भने यस्मा यो गर्नै हुन्न, त्यो गर्नै पर्छ भन्ने। चिनी रोगमा सबैको घाऊ पाक्ने त हैन नि, घाऊ निको हुन ढिलो हुने सम्भावना बढी मात्रै त हो नि। हामीले बुझाउने तरिका अनी उनिहरुको बुझाईमा कती फरक हुन्छ।
कुरा नबुझेको हो कि भनेर म पटक पटक गएर सम्झाए तर अप्रेसन गरेर नि ठीक हुने 'झुठो' ग्यारेन्टि नपाएकाले उनिहरु खुशी थिएनन्, शायद अप्रेसन गरेर नि ठीक नहुने भए किन गर्नु भनेर सोच्दै थिए कि, वा अप्रेसन गरेर नि ठीक पार्ने ग्यारेन्टि दिन नसक्ने डक्टरसँग के उपचार गराउनु भनेर सोच्दै थिए कि। म अनुमान मात्रै लगाउन सक्छु। तर एकछिन पछी थाहा भयो उनिहरु उपचार नै नगराउने भनेर हस्पिटलबाटै Left against medical advice गरेर गए रे। दु:ख लाग्यो, कुरा बुझाउन नसकेर हो कि उल्टो बुझेर हो कि नबुझेर हो, एउटा बाँच्नसक्ने जिन्दगी विना उपचार अस्पतालबाट फर्कियो। उस्लाई केही नहोस् वा उनिहरुलाई अर्को हस्पिटलमा भए नि जाने बुद्धी आओस्, त्यही कामना मात्र गर्नसक्छु अब त म।
अर्को घटना, २ हफ्ताकी सुत्केरी ‘ज्वरो आयो, पिडुला दुख्यो’ भनेर आएकी थिईन्, यस्तोमा पहिलो शंका डि भि टि अर्थात डिप् भेन थ्रोम्बोसिस (Deep Vein Thrombosis) नेपालीमा भन्दा ‘खुट्टाका शिरा/ रक्तनलीहरुमा रगत जमेको अवस्था’ नै हुन आउछ। त्यही अनुसार खुट्टाको रक्तनलीको डोप्लर/ Doppler गर्दा रोग त्यही नै देखियो। यो रोग बाहिरबाट हेर्दा साधारण देखिन्छ, ज्वरो आको, खुट्टा दुखेको मात्रै हुन्छ तर यस्मा जटिलता आइ खुट्टाका रक्तनलीमा जमेको रगत फोक्सोको रक्तनलीमा गएर अड्की फोक्सोमा रक्त संचालन नै बन्द भै सास फेर्न गाह्रो भै ज्यानसम्म जान सक्छ/ Pulmonary Embolism। अनी यस्को उपचारमा रगतलाई पातलो गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हेपारिन वा एल एम डब्ल्यु एक्स/LMWX नामको औषधीबाट गरिन्छ। यो उपचार दुई धारको तरवार जस्तो हो, रगत हुनुपर्ने जती पातलो नभए जमेको रगतले समस्या दिनसक्ने र हुनुपर्ने भन्दा बढी पातलो भए विभिन्न अङबाट रक्तस्राव हुनसक्ने खतरा रहन्छ। विरामीलाई उपचार शुरु गर्नु अघी आफन्तलाई यि सबै कुराको जानकारी त दिनुपर्‍यो नि।
यि सबै कुरा भनेर “यस्तो रोग हो, उपचार यसरी गरिन्छ, यस्तो यस्तो समस्या 'हुनसक्छ', तर हामी आफ्नो तर्फबाट गर्नसक्ने सबै कुरा गर्छौ। जहाँ पनि गर्ने उपचार यही हो” भन्दा उनिहरु आत्तिए। “तपाईं त विरामीको यो विग्रन सक्छ त्यो हुनसक्छ भन्नुहुन्छ कसरी उपचार गर्ने” रे। अरे बाबा अहिले हामीले “विरामिलाई सबै ठीक हुन्छ, न आत्तिनुस्, केही बिग्रदैन” भन्यो अनी पछी रोगको जटिलताको कारणले विरामीलाई केइ तलमाथी भो भने डक्टरको लापर्वाही, अस्पताल दोषी भनेर उफ्रन्छन्। यि यस्ता रिस्क त तपाईं जहाँसुकै उपचार गराउनुस् न, हुन्छ नै। त्यो रिस्क त विरामी र उस्का आफन्तले निर्णय गरेर लिने कुरा हो नि, यस्मा डक्टरले केइ गर्न सक्दैन। १००% विरामी ठीक त संसारको कुनै कुनाको डक्टर, अस्पतालले नि गर्न सक्दैन।
अनी हामीलाई रोग अवस्थाहरुको जटिलताहरुको बारेमा सुन्ने बानी नभ'को हो कि के हो, यस्तो यस्तो हुनसक्छ भन्यो भने सब डरले कालोनिलो हुन्छन्। यो यो हुनसक्छ को मतलव यो हैन कि तपाईंकै विरामीलाई हुन्छ, १०० जनामा ५-१० जनामा यस्तो हुनसक्छ, अरु ९०-९५ जना त केइ नभै ठीक भएरै जान्छन् नि। हामी खाली ग्यारेन्टिका साथ यो भन्न सक्दैनौ कि तपाईं त्यो ९५ जनामा पर्नुहुन्छ कि ५ जनामा। उपचार गरे ९५ प्रतिशत ठीक हुने सम्भावना छ र नगरे रोग निकै हुँदैन भने त्यस्मा नि उपचार गर्ने कि नगर्ने भनेर सोचिराख्नु पर्छ र? उपचार नै नगर्ने भन्दा त यो फायदाकै सम्झौता हुन्छ हैन र? तर हामीलाई पहिलेदेखी नै डक्टरले हुनसक्ने जटिलताहरु बारे शायदै सुनाउथे, अझ पहिले पहिले प्राइभेटमा त विरामी तर्सेर अर्कोमा जाला भनेर ‘सबै ठीक हुन्छ’ भनेर झुटो आस्वासन नि दिईन्थ्यो। यस्ता झुटा आस्वासन केही नहुदासम्म त गज्जब लाग्छन्, त्यस्तो डक्टर अती सिपालु, जान्ने, ‘भगवान’ झै लाग्छ तर त्यो झुट सधैं सत्य रही नरहनसक्छ। अनी त्यो बेला के हुन्छ आँफै सोच्नुहोला।
म एउटा कुरा नढाँटीकन ‘फ्र्यान्क्ली’ भन्छु है - कुनै पनि डक्टर, अस्पतालले “जस्तोसुकै रोगको पनि ग्यारेन्टिका साथ उपचार गर्दिन्छु, केही कम्प्लिकेसन आउँदै आउँदैन” भन्न सक्दैन। यदी कसैले त्यस्तो भन्छ भने उस्ले तपाईंलाई मिठो झुट बोलिरहेको हुन्छ। होला सामान्य रुघाखोकीमा ९९%, ९९.९% ठीक होला तर सबै ठीक हुन्छ वा तपाईंलाई ठीक पार्दिन्छु भनेर ग्यारेन्टि दिन सक्दैन, दिन मिल्दैन पनी। त्यसैले कृपया डक्टरहरुसँग उपचारको ग्यारेन्टि नमाग्नुहोला, त्यो झुटो आस्वासन हुनेछ बरु के के उपचार गर्न सकिन्छ, विकल्प के के छन्, कुन तरिकाबाट गर्दा फाईदा बढी छ, कम्प्लिकेसन रोक्न के के गर्नसकिन्छ आदी बारे खुलेर छलफल गर्नुस्। त्यसो भएमा हामी नि खुशी हुनेछौ किनकी त्यो नै सही तरिका हो।
हामीले रोगको अवस्था, रोगीको अवस्था, उपचारको तरिका, हुनसक्ने जटिलता विरामी र उस्का परिवारलाई भन्ने उनिहरुलाई तर्साउनलाई भन्ने हैन, आफ्नो रोग, अवस्थाको बारेमा जान्नु उनिहरुको अधिकार भएर हो, सो जानेर त्यस अनुसार आफ्नो लागि ठीक के हुन्छ आँफैले निर्णय गर्न सकुन् भनेर हो। किनभने रोग आफ्नो, शरीर आफ्नो, खर्च आफ्नो, अनी निर्णय नि आफ्नै हुनुपर्छ, हामी डक्टरहरु त सो अनुसार सेवा गर्ने, मद्दत गर्ने मात्रै हौं।
धन्न दोस्रो विरामी चै भर्ना हुन मानिन् र उन्को उपचार शुरु गरियो। अब हामीले उनलाई ठीक पार्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो गर्नेछौ, बाँकी भविश्य त कस्ले पो देखेको छ र?
Posted by Dr. Samir Lama, MD General Practice at 10:10 PM0comments
Posted by Dr. Samir Lama, MD General Practice at 10:51 PM 1 comments
कलेजमा लन्चको समय हुदै थियो, म खाना खाइहोरी लाइब्रेरी पुगें । थोरै मात्र समाचार र धेरै विज्ञापन छापिने हाम्रा राष्ट्रिय दैनिकहरुहरुमा पढौं-पढौं लाग्ने समाचार अझै निकै कम हुन्छन। कान्तिपुरको प्रथम पृष्ठ र अन्नपूर्ण पोस्टको भित्री पानामा छापिएको समाचारहरुले मेरो ध्यान आकर्षित गर्यो। यीनै समाचारहरुले मलाई धेरै पहिले देखि मनमा गाँठा परेर रहेका सुर्कनेहरु खोल्न यो लेख लेख्न प्रेरित गर्यो।
कान्तिपुर दैनिकमा हेडलाइन बनेर आएको समाचार थियो: “मुगुमा सुत्केरीको वेहाल, कसैलाई रगत छैन कसैलाई उपचार”। अन्नपूर्ण दैनिकको खबर थियो “समयमा उपचार नपाउदा शिशुको मृत्यु”।
स्वस्थ जीवन जीउन पाउनु हरेकको जीवनको न्युनतम र आधारभूत आवश्यकता हो। स्वस्थ मानिसले स्वस्थ समाज बनाउन सक्छ। स्वस्थ समाजबाट नै सम्वृद्ध र सम्मुनत राष्ट्र निर्माण हुन्छ। तर यीनै स्वास्थ्य सेवाको न्युनतम मापदण्डको घेराभन्दा माथि उठ्न नसकेको कारण हाम्रो देश आफै एउटा जटिल विमारबाट ग्रस्त छ। यसकै परिणामस्वरूप आजभोलि यस्ता समाचारहरु एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन्। यस्ता कारुणिक र हृदयस्पर्सी घटनाहरुले हाम्रो देशको स्वास्थ्य संरचना र स्वास्थ्य सेवाको कहालीलाग्दो अवस्थाको चित्रण गरेको छ।
अब एकपटक सोच्नैपर्ने वेला आएको छ, यो स्थिति कहिलेसम्म? कहिलेसम्म सुत्केरी आमाहरु उपचारको अभावमा अस्पतालको वेडमा यसरीनै वेहोस भैरहने? कहिलेसम्म समयमा उपचार नपाउदा शिशुहरूले अकालमै जीवन गुमाउने? कहिलेसम्म हामी सरकारी नालायकपना र निरिह डाक्टरहरुलाई धिकार्दै बस्ने? हो अब जवाफ खोज्ने वेला आएको छ।
कुनै पनि देशको स्वास्थ्य क्षेत्र राम्रो हुनुमा ३ ओटा संरचना बीच उचित तालमेल हुनु जरुरी छ: पहिलो सरकारी संयन्त्र, दोश्रो चिकित्सक र स्वास्थ्य जनशक्ति अनि तेस्रो आम जनता।
१. सरकारी संयन्त्र: देशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढ बनाउनुमा सरकारी संयन्त्रको मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ। चिकित्सक र दक्ष जनशक्तिलाई कार्यक्षेत्रमा खटाउने देखि लिएर नियम कानुनको तर्जुमा र पालना गराउने सम्म सराकारी संयन्त्रको हात हुन्छ। हाम्रो देशमा अहिले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हुने र त्यहाँ कम्तिमा पनि एक जना एम.बी.बी.एस. चिकित्सक हुनैपर्ने व्यवस्था छ। तर विडम्बनाको कुरा कती दुर्गम जिल्लाहरुमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र त के, जिल्ला अस्पतालनै डाक्टर विहिन छन्। उचित तलव, सुबिधा र साधन स्रोत उपलब्ध गराएर चिकित्सकहरुलाई दुर्गम भेगमा रही उपचार गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दावित्व हो तर ऊ यहाँ चुकेको छ।
२. चिकित्सक र स्वास्थ्य जनशक्ति: पछिल्लो समयसम्म लगभग १३०००जना चिकित्सकले मेडिकल काउन्सिलमा रजिस्ट्रेसन भए पनि यी मध्ये लगभग आधा चिकित्सक विदेश पलायन भएका छन्। नेपालमै रहेका चिकित्सक पनि शहर केन्द्रित छन्। सरकारी छात्रवृतिमा पढेका र निश्चित समय सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा गर्छु भनेर हस्ताक्षर गरेकाहरु पनि दुर्गममा जान आनाकानी गरिरहेका छन्। आवश्यकताभन्दा थोरै मात्र रहेको जनशक्ति अनि त्यहि थोरैमा पनि रहेको यस्तो किचलो पनि यस स्थितिको एउटा कारण हो।
३. आम सर्वसाधारण: आफ्नो सबैभन्दा ठूलो डाक्टर आफैं हो। जवसम्म हरेक मानिस आफ्नो स्वास्थ्यमा आफै सचेत हुदैन, अरु वाहिरी कुराहरु स्वत गौंण भैदिन्छ्न। जनमानसमा चेतनाको स्तरको कमी र त्यसले गर्दा Health seeking behavior र Healthy attitude को अभाव अर्को कारण हो। जानेबुझेको र थाहा भएको स्वस्थ व्यवहार पनि आफ्नो जीवनमा लागु नगर्दा पनि यो स्थिति आउन सक्छ।
समाधान समस्यामै लुकेको हुन्छ। समस्याको पहिचान गरिसकेपछि यी तिनवटै संयन्त्रले आफ्नो तवरबाट हल निकाल्नुपर्छ।
१. सरकारले व्यवस्था भए अनुरुप दरबन्दीमा चिकित्सक खटाउने,
२. चिकित्सकहरुलाई उचित तलव र उपचारको लागि चाहिने औषधी, अन्य साधान श्रोतको व्यवस्था गर्ने, इमान्दार र लगनशील चिकित्सकहरुलाई पुरस्कृत गर्ने,
३. चिकित्सकहरुले पनि देशको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो वलबुताले भ्याएसम्म स्वास्थ्य स्थितिको उत्थानको लागि पहल गर्ने,
४. आमसर्वसाधारण पनि आफ्नो स्वास्थ्यमा सचेत हुने, स्वस्थ व्यवहार अपनाउने, र जानेबुझेका कुरा आफ्नो जीवनमा पनि लागु गर्ने अनि अरुलाई पनि सिकाउने
५. स्वास्थ्यको व्यापारीकरण, यस क्षेत्रमा खुलेर लागिपरेका माफियाहरु पनि पहिचान गरेर त्यस किसिमको प्रवृति निर्मुल गर्न राज्य र आम सर्वसाधारण लागिपर्ने,
स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश र स्वस्थ संसार निर्माणको सपना साकार पार्ने मन्त्र जप्दै अगाडी बढिरहेको एउटा चिकित्साशास्त्रको विध्यार्थीको नाताले यस्ता घटनाहरु निश्चय नै मेरा लागि पनि चुनौती हुन्। यस्ता चुनौतीहरुसंग डराएर भाग्नुभन्दा पनि डटेर सामना गर्नुपर्ने आगामी दिनको टड्कारो आवश्यकता हो। अत: विसंगति र वेथितिलाई चिर्दै, आफ्नो मन, वचन र कर्मले भ्याएसम्म स्वस्थ र सम्वृद्ध नेपाल निर्माणको विगुल फुक्दै आम जनताको स्वास्थ्य उत्थानको निम्ति जीवनभर लागिरहने प्रण गर्दछु । 
पुरुषोत्तम अधिकारी @puruad
एम. बी. बी. एस., दोश्रो वर्ष
Posted by Dr. Samir Lama, MD General Practice at 8:03 AM5comments
Posted by Dr. Samir Lama, MD General Practice at 10:54 PM0comments